I-china abakhiqizi bekhandlela lamakhandlela e-deer ensimbi nabathengisi | UShengrui
Ikhwalithi ephezulu yensimbi engu-1.0mm.
Izinto: Ukujiya kwensimbi ephezulu ku-1.0mm.
Usayizi: 6” L, 8”L.10”L. 12”L, 18”L noma ngezifiso.
Usayizi: 30 x 30 x 12cm.
Iphakheji: 1pc / isikhwama sepulasitiki / ibhokisi.5pcs / ibhokisi.
I-Perfect Metal art design yamakhandlela wokubamba noma njengomhlobiso wasekhaya.
Izicelo Ngokubanzi: Abanikazi bamakhandlela ngokuqinisekile bazosebenzisa lezi ziphathi zokukhanya ezinyamazane ekhaya. Zingaba ukuhlobisa kwetafula lekhofi, imihlobiso ye-TV yamagumbi okuhlala, okokusebenza kweJiyomethri komshado, noma isiqeshana esiphakathi setafula legumbi lokuphumula. Futhi izipho ezinhle zomshado, iphathi, ikhaya nosuku lokuzalwa.
Isipho Esihle Sezimenywa, Abangane Nomndeni：Lezi ziphathi zamakhandlela ziyisipho esihle se-Friends Party, Ikhaya, i-Spa, i-Hotel kanye ne-Special Event. Isipho esihle sosuku lobaba, usuku lomama, i-Thanksgiving, uKhisimusi, usuku lokuzalwa, umshado nokuningi. Isiphathi samakhandlela e-cage yensimbi sizohlala sisesitayeleni futhi sakha okuhlangenwe nakho okukhumbulekayo komndeni wakho, i-friends nezivakashi zakho. Ngeza ubuhle nobuhle bekhaya lakho. Faka ukuthinta kothando endaweni yasendlini.
I-OEM ne-ODM: Senza yonke imikhiqizo yensimbi eyenziwe ngezifiso. Sineqembu lokwakha lobuchwepheshe elingakha imiklamo ngokusho kwamakhasimende’ imibono. Vele usazise uma unemibono ethile engqondweni yakho. Thina’ngizokwenza umcabango wakho ugcwaliseke.
Langaphambilini Okuhlobisa udonga hook okhiye
Olandelayo: Umnikazi we-napkin wensimbi wokuhlobisa